UNks Zama Buthelezi.
Ukuqonda Ukuvikelwa Kwegunya Lolwazi
Ukugubha i-World Intellectual Property (i-IP) Day, i-InQubate yase-UKZN, eyihhovisi lokudlulisa ulwazi ngobuchwepheshe eNyuvesi ibinewibhina ngokuvikelwa kolwazi lwengqondo ngokuhlanganyela nabameli bakwa-Spoor and Fisher Attorneys.
UNks Charlotte Mashaba, Imenenja yakwa-Technology Transfer, ubalule ubumqoka bokuqonda i-IP kwezebhizinisi nemikhakha ethile: ‘Sibe nochungechunge lwamawebhina, sakhuluma ngobuchwepheshe obulingisa ukwenza kwabantu i-artificial intelligence namalungelo okuvikela umsebenzi ocatshangwe wumuntu. Namuhla sizodingida ngamalungelo omsebenzi obhalwe wumuntu, sinenze niqonde ukuthi ayini, enzani nokuthi asetshenziswa kanjani.’
UNks Zama Buthelezi, ummeli omkhulu e-Spoor and Fisher Attorneys nowayengumfundi wase-UKZN, ubheke indikimba yange-World IP Day. Ngenxa yobudlelwano phakathi kwemicabango nomthetho wokuvikela amalungelo olwazi olubhaliwe, ufunde isitatimende se-World Intellectual Property Organization (i-WIPO): ‘Lonke ibhizinisi liqala liwumcabango. Zonke izinkulungwane zamabhizinisi amancane naphakathi nendawo ezikhona emhlabeni zaqala ngomcabango owenzeka engqondweni yomuntu ngaphambi kokuthi wethulwe.’
Egxile enhlosweni yomthetho wezokuvikela amalungelo okubhalwe phansi ukugwema ukuthi kukopishwe, uNks Buthelezi wengeze ngokuthi amalungelo okuvikela okubhaliwe aphelela emisebenzini yezincwadi, ubuciko, okuqoshiwe, amafilimu ashuthiwe, okusakazwayo, okushicilelwe nezinhlelo zamakhompyutha.
Uphawule wathi amalungelo okubhalwe phansi ayazenzakalela futhi awabhaliseki eNingizimu Afrika, ngaphandle kwamawafilimu aqoshiwe.
Engena kokudingekayo ukuvikela amalungelo okubhalwe phansi, uNks Buthelezi uthe: ‘Umsebenzi kufanele kube ongakaze ube khona, ube wumsebenzi womsunguli wawo, ongakotshelwanga ndawo. Kufanele umsunguli womsebenzi kube yisakhamuzi noma wumuntu ohlala eNingizimu Afrika noma ezweni le-Berne Convention noma kube ngukuthi umsebenzi wabo waqale washicilelwa eNingizimu Afrika noma kwelinye lamazwe angaphansi kwe-Berne Convention.’
UNks Buthelezi ugcizelele ubumqoka bokuthi umuntu aliqophe phansi isu lakhe ukuze livikeleke, wabalula ukuthi umthetho unqanda abanye ukuthi bangantshontshi “umsebenzi”, hhayi “okucatshangiwe”.
Ecaphuna emikhakheni eminingi ye-IP, ubheke ezinye izindlela zokuvikela umcabango womuntu, izinto eziqanjiwe namagama amabhizinisi njll. Ubale umsebenzi owenziwa ngenkathi umuntu eqashiwe nowabantu abayitoho njengezinye zezibonelo ezingangeni ebunikazini bolwazi olucatshangwe ngumuntu.
Okokugcina uNks Buthelezi ubalule ukuthi amalungelo okubhalwe phansi ayaphela emva kwesikhathi esithile, imvamisa okuyiminyaka engama-50 ngemva kokufa komsunguli noma kusukela umsebenzi washicilelwa. Ngemva kwaloko, kusuke sekungowomphakathi. Ubale imithetho engavumelekile nezenzo zokuyiphula ezikhona kulokho okuvikelwa wumthetho, waveza izisombululo.
Ukubuka iwebhina eqoshiwe, cindizela lapha.
Ikhodi yokungena: cBRt$t1F
Isifundiswa Sesoyiloji Sase-UKZN Siqokelwe Ukuba Ngumcwaningi we-CREST
Iwebhina yase-Centre for Civil Society Idingide Amasu Okuqala Kokugomela I-COVID-19